GameHub: Ny tranomboky mitambatra ho an'ny lalao rehetra | Avy amin'ny Linux
GameHub: Ny tranomboky mitambatra ho an'ny lalao rehetra
Na eo aza ny eritreritry ny maro, Rafitra miasa GNU / Linux manana fanohanana tsara a lalao isan-karazany amin'ny kalitao isan-karazany, ao anatin'izany ny kalitaon'ny sary sy laza tsara indrindra. Ity, noho ny fampiharana tsara toy ny Steam, ankoatry ny maro hafa, toy ny GameHub.
Manokana, GameHub dia fampiharana iray izay miasa amin'ny zavatra maro ho iray fitehirizam-boky natambatra ho an'ny lalao rehetra, ankoatry ny famelana anao hijery, hampidina, hametraka, hihazakazaka ary hamono ny kilalao amin'ny loharano mifanentana.
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny tranonkala ofisialiny, GameHub misy amin'ny a kinova miorina (tompo) isa 0.15.0-1 ary amin'ny a famolavolana kinova 0.15.0.35-dev. Navoaka ny kinova miorina rehefa ampiharina ny fiasa vaovao ary miasa tsy misy olana fantatra. Ireo kinova miorina amin'ny ankapobeny dia tsy ahitana ny ankamaroan'ny fiasa sy fanatsarana farany. Raha ny kinova fampandrosoana ny GameHub Ahitana endri-javatra sy fanatsarana vaovao izy ireo izay sedraina na andrana.
Tonga ao endrika fisie samihafa azo apetraka izay manamora ny fampiharana azy amin'ny isan-karazany indrindra Rafitra miasa GNU / Linux. Ny endrika azo sintonina ankehitriny dia ".Deb, flatpak ary appimage". Ary koa, azo apetraka amin'ny alàlan'ny repositories, namboarina teo aloha, afa-tsy ao amin'ny GNU / Linux Distro Pop! _OS, satria azo apetraka ao izy io.
1.3 Pikantsary amin'ny fampiharana napetraka
Manohana ny lalao tsy tompon-tany ary koa ny lalao Linux tompon-tany.
Manohana sosona mifanentana marobe amin'ireo lalao tsy tompon-tany, toy ny: Divay / Proton, DOSBox, RetroArch, ary ScummVM. Izy io koa dia ahafahana manampy emulator mahazatra.
Izy io dia manohana an'i WineWrap, izay fonosana fonosana efa voamboarina mialoha ho an'ny lalao tohanana.
Manohana loharanom-pahalalana sy serivisy marobe: Steam, GOG, Humble Bundle, ary Humble Trove.
Ahafahanao manampy (mitantana) lalao napetraka eo an-toerana.
Mora ny mitahiry sy mitantana ny fanangonana lalao tsy misy DRM.
Manamora ny fampidinana ireo installer, DLC, ary atiny bonus avy amin'ireo sehatra an-tserasera sasany.
Ary farany, ankoatry ny zavatra hafa, dia mamela ny overlay ny rafi-drakitra azo ovaina (overlay ny filesystem). Noho izany, mamela anao hametraka, manaisotra, mampihetsika ary manafoana ny DLC na Mods ianao nefa tsy manolo ireo rakitra kilalao amin'ny fotoana rehetra. Satria ny takona tsirairay dia voatahiry misaraka ary tsy misy fiantraikany amin'ny rakotra hafa. Ary amin'ny fomba toy izany, ny fanovana rehetra amin'ny rakitra lalao dia voatahiry ao anaty lahatahiry misaraka ary mora ny mamerina azy.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, dia azo apetraka amin'ny fomba samihafa amin'ny alàlan'ny trano fitehirizana sy fonosana, amin'ny fomba tena tsotra, ary hazavaina tsara ao aminy tranokala ofisialy. Ho an'ny fandinihana tranga, izay misy olana aminay, dia natao tamin'ny alàlan'ny fametrahana Terminal (Console), ao anatin'ny Distro MX Linux 19 (DEBIAN 10), izay nametrahana ny sehatra gaming Steam teo aloha.
Ireto ny fomba fiasa:
nanao hoe: baiko baiko, avela hanampy ny tahiry ofisialy, ampio ny fanalahidy fitehirizana, fanavaozana ny lisitry ny fonosana an'ny tahiry rehetra misy ankehitriny sy mametraka GameHub avy amin'ny tahiry napetraka teo aloha.
Pikantsary amin'ny fampiharana napetraka
naoty: Na dia GameHub Fantatro tsara ny session ampiasain'ny mpampiasa ahy Steam, ary sintomy sy apetraka Proton 4.2 sy Proton 5.0, amin'ny alàlan'ny Steam, tsy mamono araka ny tokony ho izy izy ireo, na dia azoko antoka aza fa tsy maintsy misy olana eo anelanelany Steam ary ny my GNU / Linux Distro, aza manome GameHub.
Raha mila fanazavana fanampiny momba GameHub ny tranokala ofisialiny dia azo tsidihina ao GitHub, na mizaha fomba hafa hanoloana azy, toy ny Lutris for Linux ary o Goga, LaunchBox, Photon, Playnite for Windows. Ho fanampin'ny Steam ho an'ny sehatra roa.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «GameHub», fampiharana na sehatra filalaovana loharano maimaimpoana maimaimpoana sy malalaka, voasoratra amin'ny Vala mampiasa GTK + 3, ho an'ireo mpankafy an'i Lalao amin'ny GNU / Linux, dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GameHub: Ny tranomboky mitambatra ho an'ny lalao rehetra
Dislocker, fitaovana iray hahazoana fidirana amin'ny partitions voahodidin'ny Bitlocker avy amin'ny Linux
Toerana fampiantranoana rindrambaiko maimaimpoana sy misokatra: Tsara indrindra ho an'ny 2020